Video: Mwepu ụgbọ ibu azụmahịa na Listrak | Martech Zone
Vidio: Mwepu ụgbọ ibu azụmahịa na Listrak
Sunday, Eprel 24, 2011 Wednesday, November 30, 2011 Douglas Karr
Mgbe ọ bụla ị na-eme nchọgharị Youtube, ị chọta mkpuru. E bipụtara vidiyo a site na Listrak na February mgbe ha malitere usoro ịgbahapụ ịzụ ahịa ha, mana achọrọ m ibipụta ya ebe a maka ebumnuche di na nwunye. Akpa, ọ bụ a mara mma nnyocha nke ihe ịzụ ahịa gbahapụrụ bụ… ọzọ, ọ bụ a mara mma video na m nwere olileanya Listrak na-amị ọzọ nke ha.
Nke a bụ ụfọdụ isi ihe si na Ndepụta ozi ndepụta ngwaahịa Listrak:
Dabere na saịtị Listrak, ụgbọ ibu azụmahịa zuru oke na ntanetị bụ nsogbu ọnụ ahịa ndị na-ere ntanetị n'ịntanetị 71% nke mgbanwe ha na-atụle ijeri $ 18 kwa afọ. Ndepụta Listrak nwere agbahapụkwa mgbake mgbake mgbako ya mere ị nwere ike ịkọ atụmatụ ọghọm gị ngwa ngwa.
Ndepụta azụmaahịa Listrak ịhapụ usoro ịmegharị ahịa na-enwetaghachi ụgbọ ala ịzụ ahịa ahapụla ma na-enye ohere ịmegharị ndị ahịa site na ịre ahịa ahaziri iche na izi ozi dị mkpa. Na-eji sọftụwia ha, mkpọsa a na-emegharị nwere ike ịbụ otu email ma ọ bụ ịnwere ike ịmepụta iyi nke ozi ịntanetị iji zụlite ntụgharị.
Abandonzụ ahịa ịzụ ahịa abụghị naanị ihe na eCommerce. Corporatelọ ọrụ ọ bụla ejiri ụlọ ọrụ rụọ ọrụ maka ịme ahịa inbound na-enwekarị adịghị ike ebe ndị ọbịa na-efu na usoro ntụgharị. N'oge ụfọdụ, ọ bụ naanị n'ihi na nhazi adịghị mma anaghị enye gị ume itinyekwu aka na ya. Nsogbu ndị ọzọ nwere ike ịbụ ụdị buru ibu, oge na-aga ngwa ngwa, ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ụzọ iji mee ka ndị ọzọ na-ege ntị, ị ga-ahụkarị na ọnụego ntụgharị gị ga-akarị mgbanwe ọ bụla ị na-enweta na ndị ọbịa ọhụụ.
Na-agbake site na Google Panda
Belata Nkebi CSS gị site na 20% ma ọ bụ karịa